नेपाल आज | नवनिर्वाचित एनआरएनए अध्यक्ष पन्तलाई सबैले सहयोग गरौं ( भिडियोसहित)
नवनिर्वाचित एनआरएनए अध्यक्ष पन्तलाई सबैले सहयोग गरौं ( भिडियोसहित)
हालै काठमाडौंमा सम्पन्न गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवौं सम्मेलनमार्फत बामपन्थी खेमाका कुमार पन्त निर्वाचित भएपछि प्रजातान्त्रिक समूह झस्किएको छ । एनआरएनएको स्थापनादेखि विकास र विस्तारमा प्रजातान्त्रिक समूहले आर्थिक योगदानसहित दिलोज्यान दिनुपर्ने तर नेतृत्व चाहिं बामपन्थीलाई सुम्पनु पर्दा नेपाली कांग्रेस र बिभिन्न देशमा रहेका कांग्रेस समर्थक एनआरएन झस्किएका हुन् ।
नेपाली जन सम्र्पक समितिका पूर्व महामन्त्रीसमेत रही बेलायतमा प्रतिष्ठित जीवन यापन गरिरहेका इन्जिनियर आर. के. त्रिपाठी भन्छन्, ‘ निर्वाचन नभएसम्म राजनीतिक विचारधारा राख्नु ठिकै हो । अब निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि हामीले स्वीकार गरेका छौं । अब राजनीतिक विचारधारको पूर्वाग्रह राखेर बस्नु हुँदैन । हामी सबैले अध्यक्ष कुमार पन्तलाई सहयोग गर्नुपर्छ । एनआरएनए सबैको साझा संस्था हो । यसलाई साझा संस्थाकै रुपमा अगाडि बढाउन हामी सबै तयार हुनुपर्छ । ’
संघको नवौं सम्मेलनका दौरान थुप्रै अमर्यादित र अशोभनिय गतिविधि भएका छन् । अनावश्यक तडकभडक र तामझाम प्रदर्शन भएको छ । तोडफोड भएको छ । यसले पक्कै पनि राम्रो सन्देश दिएको छैन । यसले सबैलाइै दुःखी बनाएको छ । अब यी सबै कमीकमजोरीलाई सच्याएर मुलुकको विकास र समृद्धि तथा संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको हकहीतमा केन्द्रीत हुनु नै पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ ।
त्रिपाठी भन्छन्, ‘एनआरएनहरुले व्यक्तिगत लाभ र व्यवसायलाई मात्र महत्व दिएको गुनासो सुनिन थालेको छ । अस्पताल र होटल व्यवसायमा मात्र लगानी गरेको कुरा छ । अब पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सेवामुलक र कल्याणकारी काममा पनि एनआरएन समर्पित हुनुपर्छ । यसका लागि अध्यक्ष कुमार पन्तसंग हातेमालो गर्न हामी तयार छौं । ’
नेपालको विकास र समृद्धिका लागि नेपाली राजनीतिक दल, नेपाल सरकार र यहाँका जनता नै प्रमुख जिम्मेवार हुनुपर्छ । छिमेकी तथा मित्र राष्ट्र र एनआरएनहरु भनेका सहयोगी मात्र हुन् । नेपालको विकास गर्ने हो भने मुख्यतः पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालमा विकासका लागि पूर्वाधारमा ध्यान दिएको पाइदैन । पहिला कार कि रोड भन्यो भने नेपालको ताल हेर्दा कार रोजे जस्तो हुन्छ । तर, यसो होइन । पहिला रोड बनाउने हो, त्यसपछि मात्र कार ल्याउने हो । विदेशमा यस्तै हुन्छ । यसको अर्थ पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हो ।
त्रिपाठी भन्छन् ‘ नेपालको द्रत विकास गर्ने हो भने केही वर्ष भित्रै फाष्ट ट्रयाकको निर्माण, ल्हासासम्मको राजमार्ग निर्माण र संचालन तथा केरुङ रसुवाको बाटोलाई गुणस्तरीय बनाइ काठमाडौंसम्म जोडन अनिवार्य छ । यस्तै, कम्तिमा पनि बुढीगण्डकी, अरुण र मेलम्ची खानेपानी आयोजना छिटो भन्दा छिटो पूरा गर्नुपर्छ । यति पनि नगर्ने हो भने नेपालको विकास गर्न कसैले पनि चाहेका छैनन् भन्ने बुझिन्छ । ’
नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा लैजान ‘भिजनरी र टावर पर्सनालिटी’ भएको नेता चाहिन्छ । नेपालमा ढुंगा हान्ने, अराजक आन्दोलन गर्ने विषयमा ‘टावर पर्सानालिटी’ देखिए, तर देशलाई निकास दिने ‘टावर पर्सानालिटी’ भएन । नेतृत्व विकासका लागि राजनीतिक अभ्यास पनि भएको छैन । त्यसकारण यो किसिमको ‘भिजनरी र टावर पर्सानालिटी’ पाइदैन कि भन्ने चिन्ता पनि छाएको छ ।
‘नेपालका नेताहरुले विदेशीको हस्तक्षेप भयो भनेर कराउँछन् । के जोरपाटी–चाबहिल सडकखण्ड विदेशीले पिच गर्न नदिएको हो ? आफू सिन्को पनि नभाँच्ने अनि दोष जति विदेशीलार्ई दिने ? नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन, धर्म, संघीयता, गणतन्त्र लगायतका सबै विषयमा विदेशीलाई दोष दिनु गलत हो । यो सबै नेताहरुको कमजोरी हो । उनीहरु क्षमताहीन भएकाले यसो भनिरहेका छन् । वास्तवमा विदेशीलाई नेपालप्रति कुनै चासो नै छैन । ’ त्रिपाठी भन्छन् ।